» एउटा पूरानो रुखमा स्थापना भएको पुस्तकालय !
एउटा पूरानो रुखमा स्थापना भएको पुस्तकालय !
२५ श्रावण २०७६, शनिबार ०६:४१
एकजना पुस्तकप्रेमीले १ सय १० वर्ष पुरानो रुखमा पुस्तकालय स्थापना गरेका छन् । लिटिल फ्री लाइब्रेरी नामक यो अनौठो लाइब्रेरी इडाहोस्थित एउटा पुस्तकालयमा लाइब्रेरियनको जागिरे शराली आर्मितागे होवार्डले स्थापना गरेकी हुन् ।
सय वर्ष पुरानो रुखको ठूटोमा बनाएको त्यो पुस्तकालयले धेरैलाई अचम्ममा पारेको छ । अमेरिकाको इडाहोमा बनेको यो पुस्तकालय बुढो रुखको ठुटोमा रहेको छ । आफ्नो घर अगाडिको बगैँचामा रहेको १ सय १० वर्ष पूरानो रुख ढाल्नका लागि ठुट्याइदाँ उनलाई बँचेको ठूटोमा पुस्तकालय बनाउने सोचाइ आएको थियो ।
त्यसपछि रुखको ठुटोमा तलबाट प्वाल पारी ढोका बनाई भित्र खोपिएर खोक्रो पारेर माथिबाट छानो समेत हालियो । रुखको ठुटोभित्र किताबहरु राख्ने घर्रा समेत बनाएर हालियो । जसमा उनले आफूलाई मनपर्नेलगायतका विभिन्न पुस्तकहरु राखेर गज्जबको पुस्तकालय तयार पारिन् । यो पुस्तकालय अहिले स्थानीय क्षेत्रमा निकै चर्चित बनेको छ ।